လာမယ့် ၁၅ ရက်နေ့မှာ Myanmarsat2 ဂြိုဟ်တုကို တနိုင်ငံလုံး စသုံးနိုင်တော့မည် - Lucky9
Homepage / ကြားသိရသမျှ / လာမယ့် ၁၅ ရက်နေ့မှာ Myanmarsat2 ဂြိုဟ်တုကို တနိုင်ငံလုံး စသုံးနိုင်တော့မည်
လာမယ့် ၁၅ ရက်နေ့မှာ Myanmarsat2 ဂြိုဟ်တုကို တနိုင်ငံလုံး စသုံးနိုင်တော့မည်
မြန်မာနိုင်ငံပိုင် MyanmarSat-2 ဂြိုဟ်တုချန်နယ်များ သုံးစွဲနိုင်တော့မည်
Myanmarsat-2 ဂြိုဟ်တုသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၅)ရက်တွင် စတင်အသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်၍ စမ်းသပ်မှုများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ Myanmarsat-2 တွင် C-Band ထရန်စပွန်ဒါ (၆)ခု 432 MHz နှင့် Ku-Band ထရန်စပွန်ဒါ (၆)ခု 432 MHz. စုစုပေါင်း 864 MHz ကို အသုံးပြုနိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ထရန်စပွန်ဒါများကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် စက်ပစ္စည်းများကိုလည်း သန်လျင် ဂြိုဟ်တုစခန်းတွင် Intelsat မှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ လာရောက်စမ်းသပ်တပ်ဆင်ပြီးဖြစ်သည်။ အဆိုပါသန်လျင်စခန်းရှိ ထိန်းချုပ်စက်များကိုလည်း Intelsat နှင့် ချိတ်ဆက်စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်။ သန်လျင်စခန်း၏ စက်ပစ္စည်းများအဆင့်ဆင့်ကိုလည်း Sensor များ တပ်ဆင်ထားခြင်းဖြင့် စက်များဖမ်းယူရရှိသည့် Level များကိုလည်း အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ သတင်း ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
သန်လျင်စခန်းမှ တာဝန်ကျအင်ဂျင်နီယာများကလည်း ထရန်စပွန်ဒါများကို ထိန်းညှိစောင့်ကြည့်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဂြိုဟ်တုချန်နယ်များကို ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများ Application အမျိုးမျိုး အသုံး ပြုနိုင်ရန်လည်း Satellite Hub System များကို တပ်ဆင်ထားခြင်းဖြင့် ဂြိုဟ်တုချန်နယ်များကို နည်း လမ်းမျိုးစုံဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
MyanmarSat-1 အသုံးပြုနေသော Operator နှင့် အသုံးပြုသူများကို MyanmarSat-2 သို့ အောက်တိုဘာလနှင့် နိုဝင်ဘာလတို့တွင် ပြောင်းရွှေ့ကြရပေမည်။ ထိုသို့ ပြောင်းရွှေ့အသုံးပြုခြင်းဖြင့် နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော MyanmarSat-2 ၏ စွမ်းဆောင်မှုများကို သိရှိရတော့မည်ဖြစ်သည်။
MyanmarSat-2 ၏ ဂြိုဟ်တုလှိုင်းများသည်လည်း မြန်မာနိုင်ငံရေပိုင်နက်အတွင်းသို့ကျရောက်သဖြင့် ပင်လယ်ရေကြောင်းဆက်သွယ်ရေးစနစ်ကိုလည်း ကောင်းစွာအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မီဒီယာကဏ္ဍတွင်လည်း DTH များကို Quality ကောင်းကောင်းဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။
ဆက်သွယ်ရေးကောင်းစွာမရရှိသောနေရာများတွင်လည်း e-Education နှင့် e-Health လုပ်ငန်းများ၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ကျရောက်သည့်အခါတွင်လည်း အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ဆက်သွယ်မှုရရှိစေနိုင်ရန်အတွက် ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် Intelsat က အသုံးပြုခဲ့သည့် Intelsat Kiosk ရုံလေးများဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပုံများကို လေ့လာတင်ပြအပ်ပါသည်။
မွနျမာနိုငျငံပိုငျ MyanmarSat-2 ဂွိုဟျတုခနျြနယျမြား သုံးစှဲနိုငျတော့မညျ
Myanmarsat-2 ဂွိုဟျတုသညျ ၂၀၁၉ ခုနှဈ၊ အောကျတိုဘာလ (၁၅)ရကျတှငျ စတငျအသုံးပွုနိုငျပွီ ဖွဈ၍ စမျးသပျမှုမြား ဆောငျရှကျလကျြရှိပါသညျ။ Myanmarsat-2 တှငျ C-Band ထရနျစပှနျဒါ (၆)ခု 432 MHz နှငျ့ Ku-Band ထရနျစပှနျဒါ (၆)ခု 432 MHz. စုစုပေါငျး 864 MHz ကို အသုံးပွုနိုငျတော့မညျဖွဈသညျ။
အဆိုပါ ထရနျစပှနျဒါမြားကို ထိနျးခြုပျနိုငျရနျ စကျပစ်စညျးမြားကိုလညျး သနျလငျြ ဂွိုဟျတုစခနျးတှငျ Intelsat မှ ကြှမျးကငျြပညာရှငျမြား လာရောကျစမျးသပျတပျဆငျပွီးဖွဈသညျ။ အဆိုပါသနျလငျြစခနျးရှိ ထိနျးခြုပျစကျမြားကိုလညျး Intelsat နှငျ့ ခြိတျဆကျစမျးသပျပွီးဖွဈသညျ။ သနျလငျြစခနျး၏ စကျပစ်စညျးမြားအဆငျ့ဆငျ့ကိုလညျး Sensor မြား တပျဆငျထားခွငျးဖွငျ့ စကျမြားဖမျးယူရရှိသညျ့ Level မြားကိုလညျး အခြိနျနှငျ့ တဈပွေးညီ သတငျး ပေးပို့နိုငျပါသညျ။
သနျလငျြစခနျးမှ တာဝနျကအြငျဂငျြနီယာမြားကလညျး ထရနျစပှနျဒါမြားကို ထိနျးညှိစောငျ့ကွညျ့နိုငျမညျ ဖွဈသညျ။ အဆိုပါ ဂွိုဟျတုခနျြနယျမြားကို ဝနျကွီးဌာနမြားနှငျ့ ပုဂ်ဂလိကကုမ်ပဏီမြား Application အမြိုးမြိုး အသုံး ပွုနိုငျရနျလညျး Satellite Hub System မြားကို တပျဆငျထားခွငျးဖွငျ့ ဂွိုဟျတုခနျြနယျမြားကို နညျး လမျးမြိုးစုံဖွငျ့ အသုံးပွုနိုငျမညျဖွဈသညျ။
MyanmarSat-1 အသုံးပွုနသေော Operator နှငျ့ အသုံးပွုသူမြားကို MyanmarSat-2 သို့ အောကျတိုဘာလနှငျ့ နိုဝငျဘာလတို့တှငျ ပွောငျးရှကွေ့ရပမေညျ။ ထိုသို့ ပွောငျးရှအေ့သုံးပွုခွငျးဖွငျ့ နောကျဆုံးပျေါနညျးပညာမြားဖွငျ့ တညျဆောကျထားသော MyanmarSat-2 ၏ စှမျးဆောငျမှုမြားကို သိရှိရတော့မညျဖွဈသညျ။
MyanmarSat-2 ၏ ဂွိုဟျတုလှိုငျးမြားသညျလညျး မွနျမာနိုငျငံရပေိုငျနကျအတှငျးသို့ကရြောကျသဖွငျ့ ပငျလယျရကွေောငျးဆကျသှယျရေးစနဈကိုလညျး ကောငျးစှာအသုံးပွုနိုငျမညျဖွဈသညျ။ မီဒီယာကဏ်ဍတှငျလညျး DTH မြားကို Quality ကောငျးကောငျးဖမျးယူကွညျ့ရှုနိုငျတော့မညျဖွဈသညျ။
ဆကျသှယျရေးကောငျးစှာမရရှိသောနရောမြားတှငျလညျး e-Education နှငျ့ e-Health လုပျငနျးမြား၊ ကြေးလကျဒသေဖှံ့ဖွိုးရေးလုပျငနျးမြား၊ သဘာဝဘေးအန်တရာယျမြား ကရြောကျသညျ့အခါတှငျလညျး အခြိနျနှငျ့ တဈပွေးညီ ဆကျသှယျမှုရရှိစနေိုငျရနျအတှကျ ပွညျပနိုငျငံမြားတှငျ Intelsat က အသုံးပွုခဲ့သညျ့ Intelsat Kiosk ရုံလေးမြားဖွငျ့ ဆောငျရှကျခဲ့ပုံမြားကို လလေ့ာတငျပွအပျပါသညျ။
Previous post တစ်ပတ်စာ သင့်ကံကြမ္မာ (၁၀.၁၀.၂၀၁၉ မှ ၁၆.၁၀.၂၀၁၉) အထိ
Next post ချစ်ရတဲ့ကောင်မလေးကို ကားသစ်ကြီးနဲ့ တစ်နှစ်ပြည့် Surprise လုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းထက်ဇော်